Tun Aung Kyaw (NLD) – To Real Dialogue | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Kan Tun Thit – Mingun Sayadaw
Saung Yun La – 21 Century →
Tun Aung Kyaw (NLD) – To Real Dialogue
လူထုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးက ပြည်ထောင်စုသစ်အတွက် ရလဒ်ကောင်းတွေကတော့ တပါတီစနစ်ကို မြေမြှုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ် နှစ် ၆၀ ကျော် ပုန်ကန်ထကြွနေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားများရဲ့ဘ၀ကို ၈၈၈၈ ဒီဘက်ကာလမှာ သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဗမာ မုန်းတီးရေးကနေ စစ်အာဏာရှင်စနစ်မုန်းတီးရေးဆီသို့ မိတ်ဘက်တိုက်ပွဲ အောင်ပွဲဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အရေးတော်ပုံကို အာမခံနိုင်တဲ့ ခေါင်း ဆောင်မှုနှင့် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကို အပူတပြင်းတောင်းဆိုနေချိန်ဖြစ်တယ်။ တော်လှန်ရေးလိုအပ်ချက်ကို အမြှော်အမြင်ရှိရှိဖြင့် သွေး စည်းညီညွတ်ရေးအတွက် ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်း စိုက်ထုတ်ပြီး အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါရန် လေးနက်စွာဖြင့် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
သွေးစည်းညီညွတ်ရေးဆိုတာ တော်လှန်ရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ခက်ခဲလှပါတယ်။ ညီ ညွတ်ရေးအတွက် ထားသင့်ထားအပ်တဲ့ အမြင်သဘောထားကတော့ မတူကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့် အကြွင်းမဲ့ညီညွတ်ရေးတော့ မရနိုင် ပါဘူး။ တထပ်တည်းလည်း မကျနိုင်ပါဘူး။ တထပ်တည်းမကျပေမယ့် တော်လှန်တဲ့ဘုံလုပ်ငန်းစဉ် လမ်းစဉ်နဲ့အတူ နေထိုင်ရင်း အာဏာရှင် ကို ပူးပေါင်းလက်တွဲ တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရပါတယ်။ မတူကွဲပြားခြားနားသူများနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းဟာ အရည်အချင်းကောင်းတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခု တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေရတယ်ဆိုတာ တွေ့ချင်လို့တွေ့လာရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ ပြည်တွင်းအတိုက်ခံအင်အားစုတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်မား နေမှု၊ နိုင်ငံတကာသံတမန်ဖိအားတွေနှင့် ဘက်စုံတိုက်နေတဲ့ ဖိအားတွေကြောင့် ဖြစ်လာရတာပါ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေရတယ်ဆိုပြီး အရှိန် မလျော့ဘဲနဲ့ ကိုယ့်လူကိုယ်ယုံရင် ဟိုလူကိုဖိတိုက်ထားရပါမယ်။
တော်လှန်ရေးဟာ အမှန်တရားဖြစ်သည့်အတွက် မုချ အနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးကလှမ်း – လမ်းကကြမ်းတာမို့ ၈၈၈၈ စိတ်ဓါတ်ကို အခြေ ခံပြီး ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ိရိယတို့နှင့် အားသွန်ခွန်စိုက် ချီတတ်ကြပါမှ အောင်ပွဲပန်းတိုင်ကို အမြန်ဆွတ်ခူးနိုင်ပါမယ်။ ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် လုပ်ဘို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့့သွေးစည်းညီညွတ်တဲ့ အင်အားရှိရပါမယ်။ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးဟာ ပြည်ထောင်စုအတွက် တိုက်ရိုက်အချိုး ဖြစ်စေပါတယ်။
တော်လှန်ရေး မဟာမိတ်ရဲဘော်များခင်ဗျာ… တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေဟာ တော်လှန်တဲ့ အတွေးအခေါ်ကအဓိကကျပါတယ်။ တော်လှန် တဲ့အတွေးအခေါ် တိကျရှင်းလင်းမှသာ လမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ် ရှင်းပြီး တိကျစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်မှ အောင်မြင်ပါမယ်။ အတွေးအခေါ်ရှုပ်ထွေးနေရင် လမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေေ၀၀ါးရှုပ်ထွေးပြီး အောင်ပွဲနဲ့ဝေးနေပါဦးမယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအတွက်
တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ၊ လူမျိုးစုံတော်လှန်ရေး တပ်မတော်အင်အားစုတွေ၊ ပြည်သူလူထုတွေ မာန်သွင်းပြီး ဟန်ချက်ညီညီ ဖိတိုက် ထားနိုင်မှ၊ ဟန်ပြတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကနေ စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအဆင့်ကို တွန်းပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေတဆင့်….
ကိုယ့်လူကိုယ်ယုံရင် ဟိုလူကို ဖိတိုက်ထားကြပါရန် တပ်လှန်နိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
Posted by oothandar on August 14, 2011 in Op-Ed